အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - အဝိုင်းတွင် Entertainment က "NYPD အပြာရောင်" သို့က New Life ရှူရှိုက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » အဝိုင်းတွင် Entertainment က "NYPD အပြာရောင်" သို့က New Life ရှူရှိုက်
အဝိုင်းတွင် Entertainment က "NYPD အပြာရောင်" သို့က New Life ရှူရှိုက်
စက်ရုံသည် 2s ရဲပြဇာတ်သတ်မှတ်သောသူဟာ Emmy-အနိုင်ရစီးရီး၏ရှစ်ရာသီ၏တောက်ပ 1990K ပွနျလညျထူထောငျပြီးဆုံး။
BURBANK-ခုနှစ်တွင်စီမံကိန်း 20 များအတွက်th ကိုးလ spanning Century Fox, အဝိုင်းတွင် Entertainment က ပွနျလညျထူထောငျနှင့်ဂန္လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒရာမာ၏ပထမရှစ်ရာသီပိုကောင်းသော NYPD အပြာရောင်။ ထက်ပိုမို 170 1 နာရီဖြစ်စဉ်များအသစ်တခုပြည်တွင်းလွှတ်ပေးရန်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အရည်အသွေးပြပွဲ restore ပြန်, 2K အတွက် scan ဖတ်ခြင်းနှင့်ကိုလက်စသတ်ခဲ့သည်။
ဒါဝိဒ်သည်နို့စားနှင့်စတီဗင် Bochco အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, NYPD အပြာရောင် က 1993 အတွက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးနှင့်ကြီးမားသောမြို့ရဲများက၎င်း၏လမ်းပေါ်-Level အမြင်များအတွက်အရေးပါဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဆွဲငင်တဲ့အခါမှာ hit အနေနဲ့ချက်ချင်းဖြစ်လာသည်။ ဒန်းနစ်ဖရန့်, ဂျင်မီ Smits နှင့်ဒါဝိဒ် Caruso နှင့်တင်းမာနေအပါအဝင်ယင်း၏ ensemble သွန်း, interweaving plotlines လာနှစ်ပေါင်းရဲတပ်ဖွဲ့ပြဇာတ်များအတွက်မော်ဒယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြပွဲကိုးသူဟာ Emmy လေးရွှေကမ္ဘာလုံးနှင့်သုံးဖန်သားပြင်မင်းသားများအစည်းအရုံးဆုပေးပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အသစ်ပွနျလညျထူထောငျထဲကနေဖန်တီးခဲ့ 35mm အနုတ်လက္ခဏာ-ပထမဦးဆုံးရှစ်ရာသီရုပ်ရှင်-နှင့်အခြားမူရင်းဒြပ်စင်ပေါ်တွင်ပစ်သတ်ခဲ့ကြသည်ခုတ်ဖြတ်။ 2K စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ Lasergraphics archive ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်ကအဆိုပါဒါရိုက်တာသုံးပြီးအဝိုင်း Colorist Juan Zorn အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ကို cut အနုတ်လက္ခဏာမကြာခဏလုံးဝအမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်ရာ၏ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုကိုးကားမိတ္တူမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးအဖြစ်စီးရီး '' မူလထုတ်လွှင့်ရန်ညီဖို့ Reassembling ဖြစ်စဉ်များရှုပ်ထွေးသက်သေပြခဲ့သည်။ ပွနျလညျထူထောငျစီမံကိနျးကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်တစ်ဦးလက်ထောက်အဖြစ် 1990s အတွက်မူရင်းစီးရီးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောသူအကြီးတန်း Colorist မိုက်ကယ် Smollin သည်, ကှာဟနောက်ဆုံးမိနစ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အပြောင်းအလဲများကို၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။
"မကြာခဏအခြားယူဆောင်အဆိုပါထုတ်လုပ်သူ Post-ထုတ်လုပ်မှုပြီးစဉ်အတွင်းထည့်သွင်းခံရဖို့ကြာ," Smollin ပြန်ပြောပြသည်။ "ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုမာစတာသို့ပေါင်းစည်းနိုင်ပေမယ့်သူတို့အမြင်ကွင်းများပြန်အနုတ်လက္ခဏာသို့မဖြတ်ခဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ပေးတဲ့ Telecine နှင့်အရောင်ပေါ်သစ်ကိုပစ္စည်းသွင်းထားချင်ပါတယ်။ "
Smollin နဲ့သူ့အဖွဲ့သားမူရင်းထုတ်လုပ်မှုနေ့စဉ်သတင်းစာများမှတဆင့် combing နေဖြင့်ပျောက်ဆုံးမြင်ကွင်းများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ 20 နှစ်အရွယ်ရုပ်ရှင် element တွေကိုရှုမြင်နှင့်ဗီဒီယိုကိုကိုးကားဆန့်ကျင်သူတို့အားကိုက်ညီမှရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်မှုစနစ် flatbed တစ် Steenbeck ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးမြင်ကွင်းများတည်ရှိခဲ့သည်တဲ့အခါသူတို့ကအရောင်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်အသစ်သောသခင်သို့ပေါင်းစည်း, 2K မှာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေပွနျလညျထူထောငျခဲ့သညျ။ အလားတူပင်အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲနှင့်မူလကနေရာပြောင်းစတော့ရှယ်ယာပုံရိပ်တွေအသုံးချကင်မရာရွေ့လျားခြင်း, remastering လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း recreated ကြရသည်။
ပစ္စည်းအားလုံးကို အသုံးပြု. အဝိုင်းရဲ့ပွနျလညျထူထောငျကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ကောက်ယူဖုန်မှုန့်, ခြစ်နှင့်အခြားအပိုငျးအမဖယ်ရှားတစ်ခံမှုရှိတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကိုခံယူ MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်'' DRs Nova ့။ နောက်တော်သို့လိုက်သောအရောင်ရှိငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစီးရီး-One က၎င်း၏လက်မှတ်ဒြပ်စင်များ၏ gritty, ရုပ်ရှင်ရုံ-တကယျ့ကြည့်ပုံတူအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။
"မူလကမှတသမတ်တည်းသစ္စာရှိသောအဆိုပါကြည့် Keeping သိသိသာသာစိန်ခေါ်မှုပဲ" ဟု Zorn ကပြောပါတယ်။ "ဒီပြပွဲကို run-and သေနတ်ကိုကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်နှင့်အချို့သောမြင်ကွင်းများအတော်လေးမှောင်မိုက်ခဲ့ကြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးစီးဆင်းမှုနှင့်မျက်စိမှထိတ်လန်ဖြစ်အံ့သောငှါသံချွန်စသောအပြောင်းအလဲမရှိဘဲအားလုံးကထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေချိန်တွင်သူတို့အားအချိန်လေးကိုထိန်းသိမ်းချင်တယ်။ "
"သူတို့ကအန္တရာယ်များတွေအများကြီးကို ယူ. " Smollin သဘောတူ။ "သူတို့က Steadicam နှင့်အတူအပြင်ပန်းပစ်ခတ်မှုတွေအများကြီးကိုပြု၏။ ရဲစခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအတော်များများဟာအနိမ့်အလင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကသဘာဝအလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်အဘို့အသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကကြည့်ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့, ငါတို့သည်ခဲ့တခါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှစ်ရာသီကနေတဆင့်သိမ်းသွား၏။ "
Smollin က၎င်း၏ပွဲဦးထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပြပွဲ 20-ပေါင်းနှစ်ပေါင်းပြန်လည်လည်ပတ်ရန်ပျော်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွနျလညျထူထောငျဖြစ်စဉ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုပြီးတော့ပြန်အမှုအရာကိုများ၏ပြောင်းပြန်ပဲ" ဟုသူကဆိုသည်။ "သူတို့က, နေ့စဉ်သတင်းစာများနဲ့စတင်အော့ဖ်လိုင်း သွား. , ထို့နောက်အနုတ်လက္ခဏာဖြတ်, အရောင်တစ် Telecine ပေါ်မှာတညျ့နှင့်နောက်ဆုံးတော့ဗီဒီယိုကျွမ်းကျင်။ ကျနော်တို့အရောင်တညျ့ထို့နောက်ပထမဦးဆုံး scan ဖတ်, ပြီးတော့အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကစေလွှတ်ခဲ့သည်။ "
အဝိုင်းကိုလည်းစီးရီး '' တေးသံပြန်၏။ မူရင်းစတီရီယိုပတ်လည် 5.1 ပတ်လည်အတွင်းရောနှောခဲ့ကြသည်ကိုအဓိကအားထား။
နှစ်ဦးစလုံးအသံနဲ့ရုပျပုံသမားတွေတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာအချိန်အပိုင်းအခြားအောက်မှာ operated ။ "ကျနော်တို့ထက်နည်းကိုးလမှာရှစ်ရာသီပြီးပါကတစ်ဦးပြည်တွင်းရုပ်မြင်သံကြား airdate တွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးရန်လိုအချိန်ဇယားကိုထူထောင်" အဝိုင်းအလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Master နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် Ron စမစ်ကပြောပါတယ်။
"ဒါဟာအလွန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စီမံကိန်းကိုပဲ" ဟု Zorn ကထပ်ပြောသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးအသင်းကိုအတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ကြည့်ညာဘက်ရနှင့်အချိန်ပေါ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအများဆုံးအားထုတ်မှုကိုပေး၏။ "
အဝိုင်း Entertainment ကအကြောင်း
အဝိုင်းတွင် Entertainment ကဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Full-ဝန်ဆောင်မှု post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီး, အရောင်ဆုံးမခြင်း, အသံတည်းဖြတ်, အသံရောစပ်, ပွနျလညျထူထောငျနှငျ့ပို, နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူတို့တွင်နေသော 80 post ကိုထုတ်လုပ်မှုအော်ပရေတာထက်ပိုပြီးတစ်န်ထမ်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံလုံခြုံဆာဗာများနှင့်တစ်ဦး 40GB, ဖိုင်ဘာ-အခြေစိုက်စခန်း LAN ကွန်ယက်ကိုပါဝင်သည်။
1992 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အဝိုင်းတစ်ခုဖွင့်ချိန်မှာစိတ်ဓာတ်နှင့်အတူတစ်ဦးနုပျို, ကြီးထွားလာကုမ္ပဏီနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မစ်ရှင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်တို့နှင့်ကြီးသောအလုပ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအပြန်အလှန်အသီးအနှံများနည်းပညာနှင့်အဆောက်အဦး၏ရှေ့တန်းမှမှာကျန်ရှိသောက client များနှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးကျူးလွန်နေသည်။
အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် post ကိုထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည်တည်ထောင်မှု အသံက ရုပ်မြင်သံကြား တီဗီနည်းပညာ	2016-05-31
ယခင်: linear Acoustic BroadcastAsia 2000 မှာ MT2016 အိတ်ဆောင် Multichannel Bitstream Analyzer များအတွက်အပ်ဒိတ်များပြသ
နောက်တစ်ခု: Televisa အဓိကအမေရိကန်အားကစားဖြစ်ရပ်လွှမ်းခြုံများအတွက် Soliton စမတ်-ရုပ်သံလိုင်းကို Zao H.265 မိုဘိုင်းအန်ကုဒ်ချမှတ်